६ वटा कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दै , कुन कम्पनीको कति कित्ता ? – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:४७ Basanta Khanal	0 Comments	right share
काठमाडौं, ६ कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेका छन् । हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि बोर्डसँग अनुमति माग्नेमा २ डेभलपमेन्ट बैंक, १ फाइनान्स कम्पनी, १ जलविद्युत् कम्पनी र २ बिमा कम्पनी रहेका छन् । बैंकले अन्तिम पटक २०७७ साल माघ २३ गते १ः१.५ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेको थियो । बैंकले पहिलो पटक २०७७ पुस २६ गते हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति मागेको हो । यता, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले पनि शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारीको लागि बोर्डमा अनुमति मागेको छ ।
हकप्रद शेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डसंग अनुमति मागेका कम्पनीहरु, कुनको कति कित्ता ?
हकप्रद शेयर अुनपात
शिखर इन्स्योरेन्स १०ः३ ५,२७५,५७२
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक १ः१ १,३१२,३३८
समृद्धि फाइनान्स २ः१ २,७२९,७०५
आइएमई जनरल इन्सुरेन्स १०ः४ ४,६३०,३४४
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक १ः१ः५ ३,०००,०००
छयाङदी हाइड्रोपावर १०ः३ ८,९३,०२५
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, २२ भाद्र २०७८ मंगलवारको राशिफल पढौं
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, २३ भाद्र २०७८ बुधवारको राशिफल पढौं →